Ungaligcina kanjani ibhayisekili
Isikhathi sesikole, thatha wena ukuba ukhethe ibhayisekili
Yiziphi izinzuzo zomzimba wamabhayisekili?
Udinga ini intombi uma unebhayisekili?: Lokhu kungenye yombuthano ojwayelekile webhayisekili, kuphakamisa ibhayisekili lesimo sesimo sabathandi bamabhayisekili, ngoba kuyisidingo semvelo ukunakekelwa okwengeziwe, ikakhulukazi amabhayisekili okunemba okuphezulu, isidingo esithe xaxa ukwenza ukulungiswa kwansuku zonke, kungadlala ukusebenza okukhulu kakhulu, isikhathi eside senkonzo, ukugibela umshayeli uphephile ujabule
Amandla e-pedal adluliselwa kusuka engxenyeni yezicucu kuya onyaweni, khona-ke iketanga lidluliselwa kwi-flywheel nge-disc disc. I-flywheel idlulisa amandla ngokusebenzisa i-speaker kuya kuthayela langaphandle le-rim ngokusebenzisa ukulunywa kwesisekelo, bese kuthi lowo mkhosi ukhululwe ngokushayisana. Le ndlela amandla okuhamba ngezinyawo aguquka abe yijubane.Njengengxenye esemqoka yokudluliselwa kwamandla, uhlelo lokuhambisa luhlobene nezinga lokusebenza kahle. Ukuze ukwazi ukuguqula i-hamburger yomshayeli ibe ngesivinini esithe xaxa, udinga ukugcina i-driveline isebenza kahle nhlobo izikhathi.
Ekubuyiseleni nsuku zonke, iketanga lisengozini enkulu yokungcoliswa yendawo, njengephuzu lokugcoba indawo yensimbi: uwoyela we-chain, umphumela waso olula ungangcoliswa ngothuli, uthuli lube ngukungcoliswa kweslides kwalo lonke uhlelo lokuhambisa, okuholela ekuthini ukumelana okwandayo, umsindo owandayo, izingxenye ezisheshayo zigqoka, kuthinta imizwa yokugibela.
Ngemuva kokugibela ngakunye, gibela iketango ngendwangu ehlanzekile engasokiwe, vula isikwele, bese usula uthuli olungaphezulu kwekhonkolo. Ukugcina iketanga lihlanzekile kuyisisekelo sokuqinisekisa ukuthi uhlelo lokudlulisa luhlanzekile.Ngaphezu kwalokho, ngokuya ngezimo ezahlukahlukene zokugibela kanye nemayela, ukuhlanza okufika ngesikhathi nokuphelele kohlelo lokudlulisela, futhi engeza uwoyela omusha we-lubrication.I-oli yamatshe ephezulu ekhonkolo ngokuvamile inayo isitatimende sempilo (ubude), uma kungenjalo, isikhathi lapho uzwa umsindo omkhulu uvela khona lapho kulapho kudingeka khona ukuthi uhlanze no-oyela.
Isistimu yesivinini eguquguqukayo
Njengohlelo lokuhambisa, uhlelo lokudlulisa nalo kudingeka lugcinwe luhlanzekile ngaso sonke isikhathi, kufaka phakathi i-flywheel, isondo lomhlahlandlela, idiski lamazinyo, uma lezi zingxenye zimbozwe ngamafutha, khona-ke zizongcoliswa ngothuli, okuholele ekuhanjisweni okungalungile, umsindo, ukushesha nezinkinga zokugqoka, ukulungisa nsuku zonke, ukunaka ukuhlanzwa okufika ngesikhathi.
Njengomugqa obaluleke kakhulu wokuvikela ukuphepha okusebenzayo, uhlelo lwamabhuleki lufanele ukuhlolwa ngokucophelela nokunakekelwa ngumgibeli ngaphambi nangemva kokugibela ngakunye.
Brake ikakhulukazi ngokusebenzisa i-brake lever dra (noma i-push) clamp, yenza ukuthinteka kwesikhumba kubhuleki ngasohlangothini lwe-brake (disc), kuncike ekuxabaneni phakathi kokuqhekeka okubili, ukulungiswa kwansuku zonke, kudingeka ukuthi uhlole ukuthi ingabe le brake lever is (iwela phansi) noma ungene kahle, ibhayisekili ukuthintana kokuqala kokuwa phansi kwe-brake hand), ukuze ungabi nesibambiso sokuqhekeka kwesikebhe lapho uzophuka kungazelelwe.
Bese kuthi ipayipi lomugqa, ibhuleki lidinga ukubheka ukuthi isikulufu sokulungisa umugqa we-brake sikhiyiwe, ingcindezelo kawoyela idinga ukubheka ukuthi ipayipi lamafutha liqinisekile yini, akukho yini ukuvuza kwe-oyela; Ukuthi ukugqokwa kwesikhumba esinqobekile kungaphakathi kwebanga lokuphepha, uma ukugqokwa ngokweqile kuthatha indawo ngesikhathi
; Ekugcineni, i-rim, hlola ukuthi ngabe uhlangothi olungaphezulu lwamabhuleki luyisicaba, luhlanzekile, alikho u-oyela, i-disc brake iyafana.
Isimo sokusebenza sekhanda yindawo evaliwe, futhi ukusetshenziswa kwansuku zonke kudinga ukulungiswa kancane. Okudinga ukunakwa ukuthi ezinsukwini ezinemvula noma ngemuva kokugibela umgwaqo osanda kuhlanzwa, isondo langaphambili lijikijela amanzi odaka egiyeni eliphansi leqembu lesitsha sangaphambili. Ngalesi sikhathi, kuyadingeka ukomisa i-headset ngesikhathi bese ugcwalisa futhi i-oyile ukugcina owomile futhi ogcotshisiwe
Njengengxenye ebaluleke kakhulu yokuhamba ngebhayisekili, isondo kufanele lithembele ekudluliseleni, ekubhulekeleni, nasendudazweni, ngakho-ke kufanelekile ukunaka kakhulu ukunakekelwa kwansuku zonke. Ngaphambi nangemva kokugibela, hlola ukuthi ngabe ukhona yini umzimba wangaphandle onamathiselwe kuthayi. ingaphezulu, ikakhulukazi okusalayo kwengilazi, amatshe amatshe, njll., uma kukhona, kuhlanzwe ngesikhathi, bese ubheka ukuthi kukhona yini ukulimala kwikhethini lethayela.
Ekugcineni kancane ukuze uqiniseke, uma usebenzisa i-real-time intelligence uxhumano lwebhayisekili ukubuka idatha efanelekile, futhi kudingeka wenze ukuhlanzwa okuthile, njalo ukuze ugweme ukugeleza noma inkinobho yothuli yokwakha engenalo olubucayi, okuningi noma okuncane kuthinta ukuphepha ukugibela, ngaphezu kwalokho, ngaso sonke isikhathi futhi khumbula ukubuyekeza ngesikhathi, ikakhulukazi ngaphambi kokuqeqeshwa okungajwayelekile kokuhamba amabanga amade ukulanda amamephu amahle angaxhunyiwe ku-inthanethi nakho kudingekile.
Isikhathi sokuthumela: Apr-10-2020
Isazi: Isifunda saseWuqing, eTianjin, eChina
© Copyright - 2010-2021: Onke Amalungelo Agodliwe. Amathiphu - Imikhiqizo Eshisayo - I-Sitemap - I-AMP Mobile
I-Mountain Bike , I-Hot Mountain Bike , Izingane Ibhalansi Bike , I-Mountain Bike Evela EChina , Isikebhe Samafutha Esikebhe Sentaba i-Fat Tire , Bikey Mountain Bike ,